Inombolo yomlingo yaseChina, uyazi ukuthi iyini? | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | China, Ukuhamba kwe-Asia
Wonke umuntu unenombolo ayithandayo, noma inombolo ekhumbula okuthile okubalulekile ezimpilweni zabantu. Kepha kwamanye amasiko, izinombolo zingaphezulu kakhulu kwezibalo, zingaba wuphawu lwenhlanhla., izimpawu ezenza inzuzo enhle noma okuphambene nalokho.
Isibonelo, eChina inombolo yayo yomlingo ingu-8. Kodwa yini inombolo u-8 engenayo enye inombolo enayo? Mhlawumbe yisimo, ngoba uma ubeka inombolo engu-8 ngokuvundlile, iba uphawu lokungapheli. Uphawu olubaluleke kakhulu kwabaningi nakumaShayina.
Kepha uma ufuna ukwazi ukuthi kungani iChina inenombolo yomlingo nokuthi kungani iyinombolo leyo hhayi enye, ke qhubeka ufunde ngoba uzoba nentshisekelo kukho konke engizokutshela khona. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ngemuva kwalokhu uzozitholela le nombolo njengomlingo ngokwakho.
1 Inombolo yomlingo eChina
2 8 Agasti 2008
2.1 Emidlalweni yama-olympic
2.2 Abesifazane abakhulelwe ababefuna ukuthola izingane zabo
2.3 Imibhangqwana eminingi yashada
3 Umlingo we-8
4 Inombolo 9 nayo ibalulekile
Inombolo yomlingo eChina
I-China izwe elinamasiko amaningi nomlando ngemuva kwalo. Kumele ucabangele zonke izikhumbuzo zasendulo enazo futhi inenkolo yendabuko eqhubeka kuze kube yilolu suku.
Kepha njengoba benomlando omuhle, futhi kuyisiko elikholelwa kakhulu ezinkolelweni eziyize. Abantu besiko lamaShayina banomuzwa wokuthi izinkolelo-ze zinamandla amakhulu futhi akufanele zinganakwa. Ini uma zikhona, zenzelwe okuthile yingakho kumele zihlonishwe futhi zinakwe ezimpilweni zabantu.
8 Agasti 2008
Ngo-Agasti 8, 2008, okungukuthi 08.08.08, umuzwa ohlukile wavuswa phakathi kwabo bonke abantu baseChina, ngaphezu kwama-Olimpiki, bezwa ukufutheka okuthile okungachazeki ngabo.
Kuningi okwenzekile namuhla eChina okuphathelene nenombolo eyisishiyagalombili kanye nalolu suku olungaphindeki kubo. AmaShayina ayefuna ukukhumbula umhla ka-08.08.08/XNUMX/XNUMX njengosuku olubaluleke kakhulu ezimpilweni zabo, yingakho kwenzeke izinto ezithile ezingajwayelekile.
Inombolo 8 ibihlale ibhekwa yisiko lamaShayina njengenombolo ekhombisa inhlanhla, inhlanhla. Lokhu kungenxa yokuthi ngolimi lwesiMandarin inombolo engu-8 izwakala njenge- "ba" futhi ifana kakhulu nokuthi ibizwa kanjani ngokuthi "ukunothisa." Kwakungalesi sizathu ukuthi ukuthi iMidlalo Yama-Olimpiki yavulwa ngo-Agasti 8, 2008 ngo-8 ntambama, imizuzu engu-8 nemizuzwana engu-8. Konke kwakufanele kuphelele!
Abesifazane abakhulelwe ababefuna ukuthola izingane zabo
Kodwa-ke, lokhu akukhona ukuphela kokuqina kwamaShayina maqondana nenombolo 8. Ezibhedlela, abesifazane abaningi ababekhulelwe bacela odokotela babo ukuba babelethe noma benze isigaba sokuhlinzwa ngalo lolo suku ukuze izingane zabo zizalwe ngosuku lwenhlanhla . Kepha njengoba kubonakala, ngenxa yezifiso eziningi zabesifazane abakhulelwe zokuthi izingane zabo zizalwe ngalolo suku, odokotela abazinikelanga izicelo zabo ngoba akuyona into esemthethweni ukuyenza.
Imibhangqwana eminingi yashada
Kepha sengathi lokho bekunganele lokho engikutshele kuze kube manje, kufanele kuqashelwe ukuthi imibhangqwana eminingi yamaPekingese, bangaphezu kuka-16.400 XNUMX abashada ngalolo suku. Inhloso bekuwukuthi usuku lwango-08.08.08/XNUMX/XNUMX lungavela esitifiketini sabo somshado, into imibhangqwana eyayicabanga ukuthi ngokungangabazeki izoletha inhlanhla enkulu empilweni yayo yomshado.
Ukuze zonke izithandani ebezifuna zikwazi ukushada ngalolu suku izifunda zokubhalisela imishado zezifunda eziyinhloko zaseBeijing (Chaoyang, Haidian, Dongcheng, Xicheng, Chongwen, Xuanwu, Fengtai naseShijingshan) bavula amahhovisi abo ngamahora angama-12 ahlala isikhathi esingengaphansi kwesithupha ekuseni kuze kube yihora lesithupha ntambama. Bekukhona nabasebenzi abengeziwe abazobhekelela zonke izicelo zomzimba neziku-inthanethi. Ngakho-ke imibhangqwana eyayifuna ukushada ngalolo suku yayingakwenza ngokushesha futhi ngaphandle kwesithiyo.
Ungasho ukuthi u-8 uyinombolo yemilingo yamaShayina, kodwa futhi kunjalo ngabantu abaningi abacabanga ukuthi u-8 uwuphawu lokungapheli nokuthi le nombolo ingasho noma yini umuntu afuna ukuthi isho. 8 inombolo yenhlanhla yabaningi futhi ngaphandle kokungabaza imilingo yamaShayina.
Ekufundweni kwezinkanyezi kwamaShayina kunezimpawu ezi-8, kuhulumeni wazo kunongqongqoshe abayisishiyagalombili, banamaphuzu ayisishiyagalombili abalulekile futhi kunezintaba eziyi-8 zomhlaba ezibalulekile kubo. Abantu abaningi bazama ukuba nenombolo 8 ibe khona ezimpilweni zabo ukuze ngale ndlela, babe nenhlanhla enkulu ezimpilweni zabo.
Inombolo 9 nayo ibalulekile
AmaShayina asendulo abheka izinombolo njengengxenye eyimfihlakalo yendawo yonke. Njengoba inombolo ingajwayelekile njengo-9, kuzoba ngokwesigaba "yang" emele amandla nobudoda. E-China yasendulo inombolo engu-1 imele inombolo yokuqala, kuyilapho inombolo eyisishiyagalolunye imele ukungapheli kanye nemikhawulo, yingakho inombolo engu-9 ibuye ibonakale ezicini eziningi zempilo eChina. Isibonelo, esigodlweni sasebukhosini noma ezindlini zezindela, iminyango, amafasitela, izitebhisi noma izesekeli ezazikhona kwakuhlala kuphindaphindwa kweziyisishiyagalolunye noma inombolo eyayine-9.
KumaShayina izinombolo ezilinganayo zingaphansi kwesigaba se- "ying" kanti ezingajwayelekile ziyi- "yang". AmaShayina ajwayele ukubona impilo ngokungafani. Ngakho-ke lapho ushintsho lwenzeka empilweni kuvame ukuba ngumphumela wenguquko kokuhlukile. Uphawu olufana no-9 olufanekisela imilenze esikweni lamaShayina nalo luyisixwayiso, indawo yokuguqula okufanele ibhekwe ukuze kufundwe, kukhule, kuzalwe kabusha, kuguqulwe futhi kuguqulwe.
Ngokwesiko lendabuko lamaShayina, inombolo eyisishiyagalolunye nayo inencazelo enkulu. Esinye isibonelo ukuthi usuku lwesishiyagalolunye lwenyanga yesishiyagalolunye kade kwaba ngumkhosi obaluleke kakhulu eChina. Ngumkhosi owaziwa nge-Double Yang Festival.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » China » Inombolo yomlingo yaseChina
Amabhishi ama-Blue Flag amakhulu eSpain